umqondo Product - Dongguan Yuechuang Automation Co., Ltd
Yue Chuang Mkhiqizo Concept
Intelligent, esebenza kahle futhi ezizinzile - Vumela ukukhiqiza imoto isixhumi ngaphezulu ezihlakaniphile futhi ephumelelayo, enze imoto ephephile futhi eziqinile! Embonini yezimoto kuyinto yezimboni ezinkulu kakhulu nebaluleke kunazo zonke emhlabeni, okubonisa umkhuba sokwanda okusheshayo, intuthuko kwezobuchwepheshe kanye nokwakha kabusha zezimboni ngaphansi zangokwasemuva zezinhlelo ukuthuthukiswa ngokushesha embonini yezimoto emhlabeni wonke ngeke iphokophele ukusebenzelana, ukuhamba, self ukushayela, olunzulu ngomsebenzi big idatha ukuhlaziywa.
Njengoba elixhumanisa wesifunda yezimoto, i-isixhumi yezimoto kunendima Dredging circuit futhi sizibulale samanje imoto, okwenza ubunjiniyela yobuchwepheshe bama-electronic isicelo kabanzi embonini yezimoto, ikakhulukazi electronics yezimoto.
With ukuthuthukiswa ubuchwepheshe obusha futhi izimoto ezintsha amandla, imoto exhunywe nokushayela othomathikhi, inani idatha ukuwudlulisa emisha imoto uhlelo ashukumisayo kanye nokukhula lomchazi, yezimoto izidingo isixhumi nokwethenjelwa e imvamisa high, voltage okusezingeni eliphezulu kanye nemvelo lwamanje ngaphezulu nokuningi okusezingeni eliphezulu, miniaturization, ukuphepha, ukwethembeka, ukuvikeleka kwemvelo kuyinto ukuthuthukiswa yesikhathi esizayo isixhumi yezimoto.
Ukuze kuzuzwe emikhulu nokukhiqizwa kwezinto ngobuningi, umakhi ukukhiqizwa isixhumi kudingeka ukukhuthaza ukubekwa kwezilinganiso uxhumano e inqubo lolu shintsho ezimbonini.
Yue Chuang is a professional isixhumi yezimoto othomathikhi umshini inhlangano abahlinzeki, ne-10 eminyakeni of nakho okucebisayo R & D kanye embonini, e ezihlakaniphile, esebenza kahle futhi ezizinzile umkhiqizo umqondo i, ngokuqinile ukulawula izinga lokukhiqiza, ukunikeza komuntu siqu imoto isixhumi umshini umhlangano ezishintshayo izixazululo ngokwezifiso ukuhlangabezana nezidingo zangempela zokukhiqiza imoto isixhumi, isixhumi ukusiza abakhiqizi ukwenza isixhumi ezishintshayo umugqa ukukhiqizwa kokuthuthukisa, esindayo umsebenzi wezandla, lula inqubo ukukhiqizwa, ezinzile umkhiqizo izinga, ukuthuthukisa ukukhiqizwa kahle yokuthuthukisa yezimoto isixhumi isixhumi, ukukhiqizwa ukusebenza kahle kanye ukuncintisana amabhizinisi ..
Umbono wethu: ukuba ekilasini lokuqala imoto isixhumi umshini inhlangano brand emhlabeni, ukwenza ukukhiqizwa isixhumi yezimoto ohlakaniphile kakhulu futhi kahle, ukwenza imoto ephephile futhi eziqinile! Lena inhloso yethu futhi umthombo wamandla ethu.
Nikeza izixazululo eziphambili lonke automaton isixhumi amakhasimende, ukwamukela ukuvakashela ifektri futhi ukuxoxisana ibhizinisi, sikulungele amabhizinisi ukukhiqizwa nezixhumi yezimoto baxazulule izinkinga ezinzima, ukwamukela babonisana free nezicelo zithuthukiswe futhi ngabanye ukukhiqizwa ezishintshayo isixhumi izixazululo.